HGH Malaysia | Lapho ukuthenga i-hormone yokukhula eMalaysia e-Kuala Lumpur
HGH Malaysia | Kuphi ukuthenga i-hormone yokukhula eMalaysia e-Kuala Lumpur?
I-100% ikhwalithi yomkhiqizo Ukukhula Hormone (HGH Somatotropin) eMalaysia
Singabantu abasakaza ngokusemthethweni imikhiqizo ye-hormone yokukhula eMalaysia.
Iyini i-hormone yokukhula?
I-hormone yokukhula (i-hormone yokukhula, i-STH, i-HGH, i-somatotropin) -
I-hormone ye-peptidi ye-lobe yangaphakathi ye-pituitary gland, isetshenziselwa ezemidlalo ukudala ukusizwa kwemisipha.
Ukuguga komzimba kuhlobene ngqo nezinga lokukhululwa kwe-hormone ukukhululwa.
Ngokwesilinganiso, ngemuva kweminyaka engu-20 yonke iminyaka engu-10 izinga lokukhiqizwa kwalo liwela ngo-15%.
I-hormone yokukhula ayinayo ukuhlukana kobulili. Yilokho, izinga lalo lifana nabesilisa nabesifazane.
Naphezu kokuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa eziqukethe i-hormone yokukhula,
Inqatshelwe yi-WADO (World Anti-Doping Organization),
EMalaysia lezi mikhiqizo zithengiswa. Izinkomba zokusetshenziswa:
- I-Burning Fat
- Ukuzivocavoca nomzimba
- Amandla aphezulu,
Uhlelo lwe-Anti Aging
- Ukusebenza kweBrain eyanda
- Umsebenzi Omkhulu Wokuzivikela
- Ukuphulukiswa Okusheshayo Kwezilonda
- Yandisa Llibido Yobulili
- Ukwandisa Ubuningi Bamathambo
Uhlelo lokulwa nokuguga
Amakhomoni ayimvelo yemvelo ebalulekile empilweni yakho. Ngokudala, okuqukethwe kwe-hormone
Kancipha kancane kancane, okuholela ekusheshiseni kwe
inqubo yokuguga kanye nokuvela kokuhlobene
Uneminyaka yobudala. I-hormone yokwelashwa esikhundleni sokuvuselela ivuselela umzimba wakho ezingeni lamabhomu ama-ubisi, uwabuyisela emazingeni umzimba wakho ojwayele eminyakeni emincane.
- Izinsuku ze-5 nezinsuku ezingu-2 zivuliwe.